21 Chirevo pamusoro perenje regungwa:+ Chimwe chinhu chiri kubva kunyika inotyisa, sedutu+ rokumaodzanyemba riri kupfuura, riri kubva kurenje.+ 2 Ndakaratidzwa chiratidzo chinorwadza:+ Mutengesi anonyengera ari kunyengera, uye mupambi ari kupamba.+ Kwira, haiwa iwe Eramu! Komba, haiwa iwe Medhiya!+ Ndagumisa kugomera kwose kunokonzerwa naye.+ 3 Ndokusaka muhudyu mangu mazara nokurwadziwa kwazvo.+ Ndava kurwadziwa, sokurwadziwa kunoita mukadzi ari kusununguka.+ Ndavhiringidzwa zvokuti handinzwi; ndanetseka zvokuti handioni. 4 Mwoyo wangu wadzungaira; kudedera kwandityisa. Rubvunzavaeni rwandaida rwaitwa chinodederesa kwandiri.+ 5 Gadzirai tafura yezvokudya, rongai zvigaro, idyai, inwai!+ Simukai, imi machinda,+ zodzai nhoo.+ 6 Nokuti Jehovha ati kwandiri: “Enda, isa murindi kuti ataure zvinhu chaizvo zvaanoona.”+ 7 Zvino iye akaona ngoro yehondo ichikweviwa nemabhiza maviri ehondo, ngoro yehondo yembongoro, ngoro yehondo yengamera. Akanyatsoteerera, akateerera kwazvo. 8 Akashevedzera seshumba,+ achiti: “Haiwa Jehovha, ndimire nguva dzose panharire masikati, uye ndimire panzvimbo yangu yokurindira usiku hwose.+ 9 Zvino tarirai, kuri kuuya ngoro yehondo ine varume, ichikweviwa nemabhiza maviri ehondo!”+ Akashevedzera, achiti: “Rawa! Bhabhironi rawa,+ uye iye aputsira pasi mifananidzo yose yakavezwa yavanamwari varo!”+ 10 Haiwa vakapurwa vangu uye mwanakomana weburiro rangu,+ ndakakuudzai zvandakanzwa kuna Jehovha wemauto, Mwari waIsraeri. 11 Chirevo pamusoro peDhuma: Kune mumwe munhu ari kushevedzera kwandiri ari kuSeiri,+ achiti: “Murindi, zvakadini nenguva yousiku? Murindi, zvakadini nenguva yousiku?”+ 12 Murindi wacho akati: “Mangwanani achasvika, uyewo usiku huchasvika. Kana mukabvunza, bvunzai henyu. Uyaizve!” 13 Chirevo pamusoro pebani rerenje: Mucharara musango mubani rerenje, haiwa imi mapoka evafambi evarume vaDhedhani.+ 14 Uyai nemvura kuti muchingure ane nyota. Haiwa imi vagari vomunyika yeTema,+ gamuchirai ari kutiza muine zvokudya zvake. 15 Nokuti ivo vatiza mapakatwa, bakatwa rakavhomorwa, uta hwakakungwa uye kupisa kwehondo. 16 Nokuti Jehovha ati kwandiri: “Gore risati rapera, maererano nemakore omunhu wemaricho,+ kukudzwa kwose kwaKedhari+ kuchaguma. 17 Vaya vari kusara pavarume vanopfura nouta, varume vane simba vevanakomana vaKedhari, vachava vashomanana,+ nokuti Jehovha, Mwari waIsraeri, azvitaura.”+